Sustainable Aviation Fuel ikozvino yave kuwanikwa kunendege kuCologne Bonn Airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Sustainable Aviation Fuel ikozvino yave kuwanikwa kunendege kuCologne Bonn Airport
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Neste inogadzira kugoverwa kweNeste YANGU Sustainable Aviation Fuel kuCologne Bonn Airport.
Cologne Bonn Airport ndeimwe yenhandare dzekutanga dzeGerman uko Neste YANGU Sustainable Aviation Fuel (SAF) yave kuwanikwa kune ese ndege.
Kutanga kubhururuka kwakasimudzwa neNeste MY SAF yaive ndege yekutakura zvinhu kutanga kwaJune yaishandiswa neASL Airlines pachinzvimbo cheAmazon.
Kushandisa Sustainable Aviation Fuel ndeimwe nhanho yakakosha kune yedu yakareba-nguva chinangwa che CO2-kwazvakarerekera ndege.
Neste, mupi weyakagadzika ndege yekufambisa (SAF), yakagadzira Neste YANGU Sustainable Aviation Fuel ku Cologne Bonn Airport. Nekuita izvi, Neste iri kubatsira kusangana nematanho ari kuwedzera ekudiwa kubva mukutakura nendege nevatengi vemakambani kuCologne Bonn Airport. AFS, inotungamira mupi wekufambisa mabasa ekufambisa ndege kuGerman, inotsigira Neste kushandira uyu musika. Ndege yekutanga yakamutswa neNeste MY SAF yaive ndege yekutakura zvinhu kutanga kwaJune yaishandiswa neASL Airlines pachinzvimbo cheAmazon.
Semutungamiriri mukusimudzira, Cologne Bonn Airport ndeimwe yenhandare dzekutanga dzeGerman uko Neste MY Sustainable Aviation Fuel (SAF) yave kuwanikwa kune ese ndege. Sezvo Cologne iri nzvimbo hombe yekutakura zvinhu kuGerman, kuwanikwa kweSAF kuchapa vanotakura pasi rose mukana wekudzikisa gasi inokanganisa kupisa inokonzerwa nendege yavo yekutakura zvinhu. Mutengi wekutanga kubatsirwa nemukana uyu aive Amazon.
“Tinodada nekugona kupa ndege dzedu dzimwe nzira dzekuwedzera dzimwe nzira dzekufambisa ndege. Isu tiri kutove tichishandisa akawanda mahunyanzvi hunyanzvi kuCologne Bonn Airport - kubva kumasolar panels uye LED tekinoroji kune hunyanzvi hwekuvaka masevhisi uye neimwe nzira inofambiswa mota nemidziyo pane epuroni. Kushandisa Sustainable Aviation Fuel ndeimwe nhanho yakakosha inoenda kuchinangwa chedu chenguva refu cheEC2-isina kwazvakarerekera nendege, ”anotsanangura kudaro Johan Vanneste, Mutungamiri & CEO weFlughafen Köln / Bonn GmbH.
"Kunyangwe iri yakaoma bhizinesi nharaunda, indasitiri yendege, uye chikamu chemitoro kunyanya, chiri kuratidza kuwedzera kuzvipira kuisa mari mukuchengetedza ndege yekufambisa kuitira kuti ipe mafuta-kabhoni mafuta kune vatengi vayo," anodaro Jonathan Wood, Mutevedzeri weMutungamiri Europe, Renewable Kubhururuka paNeste. "Tiri kufara zvikuru kugamuchira Cologne Bonn Airport kunhandare iri kukura yenhandare dzinowanikwa neSAF, uye tinotarisira kufambira mberi mukuderedza gasi rinokanganisa kupisa kwendege."